Bridal Veil Chandelier - Joornaalka Naqshadeynta
Chandelier Farshaxankan - shey farshaxan oo leh nalal shidan. Qol ballaadhan oo leh saqaf guud oo adag, sida daruuro buluug leh. Chandelier wuxuu ku habboon yahay meel bannaan, isaga oo si tartiib ah uga soo qulqulaya derbiga hore una gudbaya saqafka. Caleemaha buluugga ah ee loo yaqaan 'Crystal and white white' iyadoo lala kaashanayo jileeca laascaanka ah ee tuubooyinka khafiifka ah waxay abuuraan muuqaalka daboolka duulaya ee adduunka oo dhan. Iftiinka badan ee shimbiraha duulaya ee dhalaalaya ee iftiinka iyo dahabka ah ayaa abuuraya dareemo dheeri iyo farxad.
Magaca mashruuca : Bridal Veil, Magaca naqshadeeyayaasha : Victor A. Syrnev, Magaca macmiilka : Uvelirnyi Dom VICTOR.
Halyeeyada hal-abuurka ah, naqshadaynta naqshadaha casriga ah iyo naqshada weligeed muuqata